प्रशिक्षक सहित फसेका खेलाडीहरु मध्ये चार जनाको उद्धार
२०७५ असार २४ आइतबार, थाइल्याण्ड । थाइल्याण्डको उत्तरी इलाकामा करिब दुई हप्तादेखि थुनिएर रहेका १२ बालक र एक जना प्रशिक्षकमध्ये चार बालकलाई आइतबार सकुशल उद्धार गरिएको छ । लामो समयसम्म गुफामा फसेका बालकहरूलाई नजिकैको शिविरमा लगिएको र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण गरिएको उद्धारमा संलग्न समूहका एक सदस्यले नाम गोप्य राख्ने शर्तमा बताए । ... बाँकी अंश»
२०७५ असार २४ आइतबार, टोकियो । जापानको पश्चिमी क्षेत्रका केही इलाकामा परेको अविरल वर्षाका कारण आइतबार बिहानसम्ममा ५७ जनाको मृत्यु भएको जापानी अधिकारीले पुष्टि गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
भारत र चीन ब्रिक्स सम्मेलनभन्दा पहिले अफ्रिकी मुलुकहरुलाई मनाउने प्रयासमा
२०७५ असार २४ आइतबार, काठमाडौं । यो महिनाको अन्तिममा दक्षिण अफ्रिकामा ब्रिक्स सम्मेलन हुँदैछ । यो सम्मेलनमा अफ्रिकी मुलुकहरुलाई मनाउने दौडमा भारत र चीनको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने देखिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ सम्मेलनभन्दा पहिले पूर्वी अफ्रिकाको भ्रमणको तयारीमा रहेका छन् । ... बाँकी अंश»
जापानमा वर्षाका कारण कम्तीमा ५० जनाको मृत्यु, दर्जनौँ वेपत्ता
२०७५ असार २४ आइतबार, टोकियो । जापानका पश्चिमी क्षेत्रका विभिन्न इलाकामा परेको अविरल वर्षाका कारण कम्तीमा ५० जनाको मृत्यु भएको छ । बाढी र पहिरोका कारण दर्जनौ व्यक्ति हराइरहेका छन् । ... बाँकी अंश»
प्रशिक्षक सहित फसेका खेलाडीहरुको उद्दार गर्न ‘चिम्नी’ बनाइयो
२०७५ असार २३ शनिबार, माइ साइ, थाइल्याण्ड । थाइल्याण्डमा करिब दुई हप्तादेखि एक गुफामा फसेका १२ जना बालक र उनका एकजना फुटवल प्रशिक्षकको उद्धारको क्रम जारी नै रहँदा उद्धारकर्मीले विभिन्न उपाय निकालेका छन् । ... बाँकी अंश»
अमेरिका र चीनबीच व्यापारयुद्ध सुरु, विश्वबजारमा कस्तो असर ?
२०७५ असार २३ शनिबार, एजेन्सी। अमेरिका र चीनको बीचमा शुक्रबार व्यापारयुद्ध सुरु भएको छ। विश्वको सबैभन्दा धनी मुलुकहरुको बीचमा व्यापारयुद्ध सुरु भएको हो। दुवै मुलुकहरुले आफ्नो मुलुकमा आयात हुने एकअर्काका सामग्रीहरुमा ३४ अर्ब डलरबराबरको कर बढाएका छन्। यो व्यापारयुद्धको असर विश्व बजारमा महँगी बढाउनका लागि सहायक हुनसक्ने देखिन्छ ... बाँकी अंश»
ट्रम्प प्रशासनद्वारा आप्रवासी बालबालिकाको डिएनए परीक्षण गरिने
२०७५ असार २३ शनिबार, वासिङटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अमेरिका र मेक्सिकोको सीमा इलाकाबाट छुट्टिएका आप्रवासीका बालबालिका र आमाबाबुको डिएनए परीक्षण गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य र मानव सेवा एजेन्सी (एचएचएस)ले बिहीबार सो जानकारी दिएको छ। जन्मदर्ता र अन्य विभिन्न प्रमाणको तुलनामा डिएनए परीक्षण बढी भरपर्दो हुने सो विभागले बताएको छ। ... बाँकी अंश»
प्राणघातक ग्यास आक्रमणमा सम्लग्न धार्मिक नेतासहित छ जनालाई मृत्युदण्ड
२०७५ असार २३ शनिबार, टोकियो, जापान। करिब २३ वर्ष पहिले जापानमा राजधानी टोकियोको भूमिगत रेलमार्गमा विष्फोट गराउने समूहका नेतासहित सातजनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ। ... बाँकी अंश»
व्यापार युद्धले कुनै पक्षलाई पनि फाइदा हुदैन : चिनियाँ प्रधानमन्त्री
२०७५ असार २३ शनिबार, सोफिया। चीनका प्रधानमन्त्री लि खछ्याङले व्यापार युद्ध गरेर कुनै देशलाई फाईदा नहुने बताएका छन्। अमेरिकासँग व्यापारिक विवाद भइरहेका वेला प्रधानमन्त्री खछ्याङले शुक्रबार अमेरिकाप्रति नै लक्षित गरी यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। ... बाँकी अंश»
१५ वर्षीय छोरा र १३ बर्षीया छोरीको हत्यापछि आत्महत्या
२०७५ असार २३ शनिबार, सिड्नी। अष्ट्रेलियाको एक ठूलो शहर सिड्नीमा एक पिताले आफ्ना किशोर अवस्थाका दुई छोरा छोरीको हत्या गरेपछि आफूले पनि आत्महत्या गरेका छन्। प्रहरीले शुक्रबार सो जानकारी दिएको छ। सिड्नी शहरमा यो हत्याकाण्ड अर्का एकजनाले आफ्नी श्रीमती, छोरी र छोरीका तीन सन्तानको हत्या गरेको दुई महिनापछि भएको प्रहरीले थप जानकारी दिएको छ। ... बाँकी अंश»
उत्तर प्रदेशमा प्लाष्टिकको कप र गिलास प्रतिवन्ध
२०७५ असार २३ शनिबार, नयाँदिल्ली। भारतको सर्वाधिक जनघनत्व रहेको उत्तर प्रदेशमा प्लाष्टिकको कप र झोला प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाइने भएको छ। यही जुलाई १५ तारिख देखि प्लाष्टिकको कप र झोला प्रतिवन्द गर्ने घोषणा शुक्रबार गरिएको समाचारमा जनाइएको छ। झण्डै २२ करोड जनसङ्ख्या रहेको उत्तर प्रदेशमा यसरी प्लाष्टिकको कप र झोला प्रतिबन्धको घोषणा गरिएको यो तेस्रो पटक हो। ... बाँकी अंश»
इरानले तेल निर्यात गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा रुस र चीन
२०७५ असार २३ शनिबार, भियना, अष्ट्रिया। इरानसँगको आणविक सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता अमेरिका बाहेकका अन्य मुलुकहरूले इरानले तेल बेच्न पाउने पक्षमा शुक्रबार प्रतिवद्धता जनाएका छन्। ... बाँकी अंश»
पाकिस्तानी पुर्वप्रधानमन्त्री शरिफलाई अदालतले सुनायो दश बर्षको जेल सजाय
२०७५ असार २२ शुक्रबार, इस्लामावाद । पाकिस्तानका पुर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई दश बर्षको जेल सजायको फैसला गरिएको छ । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका पूर्व प्रधानमन्त्री शरिफलाई इस्लामावादमा रहेको एक अदालतले शुक्रबार कारावासको फैसला गरेको हो । ... बाँकी अंश»
गुफामा थुनिएका १२ जनाको उद्धार गर्न गएका टोलीका सदस्यको मृत्यु
२०७५ असार २२ शुक्रबार, एजेन्सी। थाइल्याण्डको एक गुफामा थुनिएका १२ जना फुटबल खेलाडी र प्रशिक्षकलाई उद्धार गर्न गएको थाइल्याण्डको जलसेनाको एक अधिकारीको ज्यान गएको छ। बाढीबाट प्रभावित बनेको गुफामा थुनिएका उनीहरुको उद्धारका लागि खटिएका समलमान गुनान नाम गरेका अधिकारीको ज्यान गएको हो। ... बाँकी अंश»
यौन दुव्र्यवहारको मुद्दाले समस्यामा राहुल गान्धी
२०७५ असार २० बुधबार, काठमाडौं । भारतीय कांग्रेसकी सामाजिक सञ्जाल एकाइकी प्रमुख एक २८ वर्षीया महिलाले पार्टीका अर्का सहकर्मीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाएकी छिन् । कांग्रेस आईकी सामाजिक सञ्जाल प्रमुख दिव्या स्पन्दनाले यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा आफ्ना सहकर्मीमाथि मुद्दा दायर गरेकी हुन् । ... बाँकी अंश»
मलेसियन पूर्वप्रधानमन्त्री माथिको मुद्दा ब्युँतियो
२०७५ असार २० बुधबार, काठमाडौं । मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नाजिव राजाकमाथि भ्रष्टाचारको विषयमा पुनः अनुसन्धान हुने भएको छ । दुई महिनाअघि नाटकीय रुपमा निर्वाचनमा पराजयको सामना गरेका राजाकमाथि शक्तिको दुरुपयोग गरेको र कोषमा हिनामिना गरेको मुद्दा लगाइएको थियो । ... बाँकी अंश»
९ दिनमा फेला परेका खेलाडीहरुको उद्दार हुन एक महिना लाग्ने
२०७५ असार १९ मंगलबार, काठमाडौं । थाइल्याण्डको एक गुफामा थुनिएका १२ खेलाडी र एक प्रशिक्षक सकुशल फेला परेपनि उनीहरु त्यहाँबाट बाहिर निस्किनको लागि भने एक महिना लाग्नसक्ने थाइल्याण्ड प्रहरीले बताएको छ । उनीहरु उक्त गुफाबाट बाहिर निस्किनका लागि पौडी सिक्नुपर्ने वा एक महिनासम्म सोही गुफामा रहनुपर्ने थाइल्याण्डको प्रहरीले बताएको हो । ... बाँकी अंश»
गलत प्रश्न सोधेको भन्दै परीक्षा बोर्डलाई १ लाख ७५ हजार पाउण्ड जरिवाना
२०७५ असार १९ मंगलबार, काठमाडौं । गलत प्रश्न सोधेको भन्दै बेलायतको एक परीक्षा बोर्डलाई एक लाख ७५ हजार पाउण्डबराबरको जरिवाना लगाइएको छ । जीसीएसईको परीक्षामा ओसीआर परीक्षा बोर्डले सोधेको प्रश्न उत्तर नआउने किसिमको रहेको थियो । ... बाँकी अंश»
ट्रम्पको भ्रमणमा प्रतिबन्ध नीतिः कुन देशलाई कस्तो असर ?
२०७५ असार १९ मंगलबार, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भ्रमणमा प्रतिबन्ध गएको डिसेम्बर महिनामा लागू गरिएको थियो । तल्लो अदालतले ट्रम्पको यो योजनालाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो तर हालसालै अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले यसलाई जायज ठहर गरेको छ । ... बाँकी अंश»
पानी नपरेको झोंकः इरानले इजरायललाई लगायो बादल र बरफ चोरेको आरोप
२०७५ असार १९ मंगलबार, काठमाडौं । इरानले इजरायललाई बादल र बरफ चोरेको आरोप लगाएको छ । इरानका एक सैन्य अधिकारीले इजरायललाई बादल र बरफ चोरेको आरोप लगाएका हुन् । ... बाँकी अंश»